म रेग्मीको भान्जी भएको भए हुन्थे होला, म रेग्मीको नातेदार भएको भए हुन्थे होला । तर म उहाँको नातेदार पनि परिन र त्यतिबेला अरु चलखेलका कुराहरु पनि भइरहेको थियो, त्यसमा पनि म सहभागी भइनँ ।
त्यसो भए आदिवासीको छोरी भएकै कारण आफू बढुवा प्रक्रियामा नपरेको भन्ने तपाईको भनाइ हो ?
हो । सतप्रतिशत यही हो, कारण । किनभने म एउटा आइजीपी हुने मान्छेलाई नदिएर मभन्दा एकवर्ष जुनियर डीआईजीलाई एआइजी बनाएर आइजी बनाइयो ।
वर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल एउटा आँखा पनि छैन । उहाँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ भन्छन् नि, के हो ?
रेग्मी सरकारले शारीरिक परिक्षण गराएर बढुवा गर्नुपर्थ्यो । जे गरेको हो, जातले गरेको हो । अर्यालको ठाउँमा कार्की, गुरुङ वा अरु कुनै जात भए पनि पाउदैन्थ्यो, बढुवा । जबकि, नेपाल प्रहरीको सिपाहीमा त के भान्सेमा भर्ना हुँदा पनि प्लस टु र माइनस टु भन्दा बढी पावरको मान्छे फिट हुँदैन भने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवा दिदा शारीरिक रुपमा फिट छ कि छैन भनेर हेरिनु पर्छ कि पर्दैन ? शारीरिक असक्त व्यक्तिहरुलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।
तर, जो कोहीले पनि म शारीरिक रुपमा असक्त छु भनेर राष्ट्रिय आपाङ्ग महासंघबाट प्रमाणपत्र लिएर जागिर खानुपर्‍यो नि ।
अहिलेको उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग उहाँको एउटा ग्राजुएसन मात्रै छ । मैले पोष्ट ग्राजुएशन र अरु दुई विषयमा ग्राजुएशन गरेकी छु, एलएलबी गरेकी छु, अनि विभिन्न विदेशबाट ट्रेनिङहरु लिएकी छु । उहाँले पूर्वक्षेत्र जस्तो सुगम ठाउँमा बसेर कार्यसम्पादन गर्नुभयो भने मैले दुर्गम ठाउँमा बसेर काम गरेकी छु, जसले गर्दा प्रहरी नियमावली अनुसार त्यसै नै मेरो नम्बर बढी हुन्छ । मैले एक्स्ट्रा डिग्री गरेकी छु । स्वत मेरो नम्बर बढी हुन्छ । त्यसमाथि अन्तरिम संविधानमा के लेखिएको छ भने महिला, आदिवासी, पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकता दिने भन्या छ । एउटा आदिवासी त्यसमाथि महिला भएको झन् म त प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर, मलाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्दैनथ्यो न्याय मात्र दिए पुग्थ्यो । खाली विभेद नगरे मात्र हुन्थ्यो, मलाई न्याय चाहिएको थियो । नेपालमा जन्मेर हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर किन बस्नुपर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न म आन्दोलनमा लागेकी हुँ ।
संविधान निर्माण कार्यमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन । तपाईको बिचारमा यो राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुनुको खास कारण को हो ?
नेताहरुको दरिद्र मानसिकताले गर्दा नै सहमति हुन नसकेको हो । मेरा भान्जा, मेरा भतिजा सबै माथिल्लो तहमा छन्, यिनीहरुलाई किन दिने ? भन्ने दरिद्र मानसिकता र पहिचान विरोधी नेताहरु भएकाले सहमति हुन नसकेको हो । अहिले पहिचानको मुद्दा सबैतिर उठेको छ । मैले के बुझेकी छु भने आदिवासीहरुले जातीय राज्य खोजेको होइन, जातीय पहिचानसहितको राज्य खोजेको हो । समानुपातिक सहभागिता खोजेको हो ।
जहिले पनि निर्णायक तहमा तथाकथित उपल्लो वर्गका व्यक्तिहरु मात्र किन ?
जुनसुकै ठाउँमा हेर्नुहोस् एउटा प्रमुख निर्णायक ठाउँमा उनीहरु मात्रै हुन्छन् । त्यसकारण, अहिले पहिचानसहितको संघीयता भयो भने के हुन्छ भने सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ, सबै संयन्त्रमा समानुपातिक सहभागिता हुन्छ ।
पछिल्लो समय धर्मको सम्वन्धमा तपाईको के भनाई छ ?
धर्म र संस्कृतिले विभेद गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । कुनै धर्मले यहाँ विभेद गरेको छ । हिन्दू मन्दिरहरुमा दलित पस्नु नहुने रे । ब्राहमण, राई, दलित, मगर सबैको रगत त रातै हुन्छ । दलित मान्छे होइन ? दलितले बनाएको मुर्ती मन्दिरमा पुजिन्छ तर उनीहरुलाई त्यहाँ पस्न दिइदैन । यस्तो विभेद भइरहेको छ । धार्मिक आस्था आ-आफ्नै हुन्छ, धर्मको नाममा मान्छेमाथि विभेद गरिनु हुँदैन ।
अब माघ महिना आउँदैछ । स्वस्थानी पढ्ने बेला भयो । स्वस्थानीमा के भनिन्छ भने ‘७० वर्षका शिव शर्मा ब्राम्हणले ७ वर्षकी गोमा ब्राम्हणीलाई विवाह गरे’ रे । अहिलेको जमानामा पनि त्यस्तो पढ्ने ? १६ वर्ष मुनिको बच्चालाई विहे गर्ने वित्तिकै त्यो त सिधै बलात्कार केसमा परिहाल्छ । अनि धर्मको नाममा यस्ता संस्कारलाई अझै कायम गरिरहने ? हिन्दू धर्मको यस्ता विषयहरुलाई परिमार्जित गरी लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि अझैपनि गाई गोरु काटेको आरोपमा नागरिकहरुलाई पक्राउ गर्ने र दुःख दिने काम भइरहेको छ । यसलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो गलत हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेपछि सबैले आ-आफनो धर्म संस्कृति अनुसार कार्य गर्न पाउनुपर्छ । कानुनले यसलाई दण्डनीय ठान्नु हुँदैन । संविधान भनेको नेपालको मूल कानुन हो । मुल कानुनलाई आधार मानेर अन्य कानुनहरु बन्छन् । समय अनुसार कानुन संशोधन गरिदै लैजानु पर्ने हुन्छ ।
पहिचानसहितको संघीयताका लागि पदमारत्न तुलाधर नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको छ । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यो आन्दोलनलाई सफल बनाउनुपर्छ । यसले आदिवासीको एजेन्डा बोकेको छ । किनभने यो देशमा सबै जनताले समान अधिकार पाउनुपर्छ । पहिचानसहितको संघीयता राज्य निर्माण गर्नु पर्छ । जातीय राज्य होइन । सामन्ती सोंच भएकालेले जातीय राज्य भनेर भ्रम फिजाइरहेका छन् । हामी सबै मिलेर त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ । यो मुलुकको सबै जातजातिले समान अधिकार अवसर पाउनुपर्छ ।
सरकारले त आदिवासी आन्दोलन दबाउन जतिसुकै कडा कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन् नि ?
आन्दोलन गर्नेहरुले पनि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । टेबुलमा वार्ता गरेर समझदारी भएन भने छुट्टै रणनीति बनाएर पनि जानुपर्ने हुन्छ ।
तपाईं पछिल्लो समय आदिवासीहरुको कार्यक्रममा खुब हिडिरहनु भएको छ । अब यसैगरी राजनीतिमा लाग्नु भएको हो ?
हैन । राजनीतिमा लाग्ने भए म कुनै एउटा पार्टीमा गइहाल्थे नि । म कुनै पार्टीमा लागेको छैन ।
त्यसो भए तपाईंको अहिलेको परिचय के हो ?
म समाजसेवी हुँ । म पूर्व कर्मचारी । आदिवासी र उत्पीडनमा परेको समुदायको अधिकारका लागि लडिरहने व्यक्ति हुँ ।
भविश्यमा कुनै पार्टीमा लागेर सक्रिय राजनीतिमा आउने हो ?
भविश्यको कुरा त के थाहा हुन्छ । सबैको सहभागिता हुनेगरी छुट्टै पार्टी पनि जन्मन सक्छ कि (हाहाहाहा…) । तपाईहरु सबैले साथ दिनुभो भने के थाहा (फेरि हाँसो) ।
आदिवासी अधिकारको लागि थुप्रै पार्टीहरु बनेका छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पहिल्यै खोलिएको थियो, अहिले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले पनि आदिवासीहरुको मुद्दा बोकिरहेको छ । परशुराम तामाङदेखि लिएर पूर्वमा लिम्बुवान, खम्बुवान, किरात जनवादीजस्ता थुप्रै पार्टीहरु छन् ।
अहिले भएकै पार्टीहरुबाट आदिवासी मुक्ति हुन सक्दैन र ?
मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पार्टी भन्नाले पार्टीमा लाग्ने जो कोही पनि उसको भावना निस्वार्थ हुनुपर्छ । कुनै पार्टीमा विभिन्न प्रतिष्ठित पद पाइएला कि भनेर लाग्नु भन्दा पनि त्यो या यो दलले कस्तो एजेण्डा बोकेको छ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यस्ता दलहरुमा कलंकित मान्छेको जमात छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्दछ केबल दल मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन । चोखो हुन त मन पवित्र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, मलाई ।
त्यसो भए अहिलेसम्म हेर्दा पदको लागि नै आदिवासी पार्टी बनेका हुन् ?
त्यस्तो पनि होइन । तिन-चार पुस्तासम्म एउटै समुदायले पदलाई छेपारोले घोचो समातेर बसे झैं बसेपछि विवाद आउनु स्वभाविकै हो । अर्को कुरा अपरिवर्तित एजेण्डा बोकेर सामन्तवादी सोंच र चिन्तनबाट मुक्त हुन नसक्ने दलहरुमा बसेर पनि झोले हुनु बाहेक अर्को के नै विकल्प रह्यो र । यथास्थितिवादी मानसिकता बोक्नेको पछाडि बसिरहने कुरो पनि त भएन नि, अग्रगामी विचारधारा बोक्ने व्यक्तिहरु ।
दलहरुमा बोलाइरहेको पनि होला नि ?
अँ, बोलाइरहेको पनि छ । तर म पदको पछि लाग्ने मान्छे होइन । म सिद्धान्तको पछि लाग्ने मान्छे हुँ । वास्तविकताको पछि लाग्छु । पद पाउनु ठूलो कुरा होइन । पदमा रहेर मैले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छु कि सक्दिन ? भन्ने कुरो ठूलो हो ।
राजनीतिक पार्टीको पदधारण गरेर सीमित घेरामा बस्नुपर्‍यो भने विचारले स्वछन्दता पाउँदैन । आफुलाई सही लागेको कुरा बोल्न र लेख्न अनि कार्यान्वयन गर्न पाइदैन भने पदकोे के औचित्य रहन्छ र ? निर्देशनमा मात्र काम गर्नेहरु त प्रशस्तै छन् नि ।
आदिवासीहरु विभाजित हुनुहुँदैन । विभाजन गराउन खोजिन्छ तर, आफनो उद्देश्यमा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । अनि मात्र आन्दोलन सफल हुन्छ । फेरि त्यहाँ विभिन्न प्रलोभनमा परेर विभाजित भइयो भने आन्दोलन असफल हुन पनि सक्छ ।